Iza no manao inona? | NewsMada
Iza no manao inona?
Nafindra any amin’ny BNGRC ny fitantanana ny « Raharaha pesta ». Raha raisina an-tendrony, sokajiana ho toy ny loza voajanahary koa izany ny aretina. Ny fahafantaran’ny maro ity rafitra BNGRC ity, andraikiny ny fitantanana, fiatrehana ny loza voajanahary, toy ny rivodoza, ny tondra-drano, ny haintany, ny dorotrano, sy ny mifandraika amin’izany.
Mahavariana ity “fisaloran’andraikitra bevata ity”.
Rafi-panjakana matihanina, nianatra, mahafehy ny sehatra tandrify azy ny sehatry ny fahasalamana sy ny minisitera miahy azy. Lafiny “vonjitaitra”, “voin-kava mahatratra”, “vonjy tavanandro”, “sitrany ahay”, “varialoha tsy mahavita taona” ny an’ny BNGRC. Fianarana mamelon’aina, mialoha ny hahatongavana any amin’ny mpitsabo matihanina no nanofanana ny mpiasa ao aminy. Izao, ka mifamototra indray ny asa, ny mpamelon’aina indray no hibaiko ny dokotera mpitsabo!
Tsy misy asa vita raha tsy misy ny “vola”. Ankoatra ny tetibola mahazatra ho an’ny fandaniana raikitra, famatsiam-bola avy any ivelany amin’ny alalan’ny fanampiana omen’ny vondrona iraisam-pirenena ny vola tena ampiasaina sy tantanin’ny BNGRC. Amin’ny maha fanampiana azy, sarotra ny manara-maso sy manamarina ny tena iantefan’ireny fanampiana ireny, na vola izany na zavatra. Tsy vitsy kosa anefa ny tamberim-baovao azo, na voamarina io na tsia, fa maro ny “fanampiana” tsy tonga araka ny tokony ho izy any amin’ny mpahazo tombontsoa tokony hiantefany. Olona tsotra, tsy ampy fahalalana, tsy manana fomba hanehoan-kevitra sy itarainana, marefo rahateo ny ankamaroan’ny “traboina”, ka tsy mba manana “Bianco” itarainana, ary na hiteny koa aza, tsy misy “mihaino” sy mba “taitra”.
Hafa marina ny eto Madagasikara, amin’ny maha firenena fahefatra mahantra indrindra eran-tany azy. Hafa ny andraikitr’izatsy, hafa ny ataon’izaroa! Ary aza ampitoviana ny any amin’ny firenen-kafa ny eto!